Mhando dzemakomo: maitiro uye marudzi ekuputika | Network Meteorology
ChiGerman Portillo | 24/11/2021 16:42 | Geology
Tinoziva kuti kuputika kwemakomo zvimiro zve geological zvinodzinga magma anobva mukati menyika. Magma haisi chimwe chinhu kunze kweguru guru redombo rakanyungudutswa rinobva mumucheka wePasi. Kana magma yasvika pamusoro inonzi lava. Kune akawanda marudzi emakomo anoputika zvichienderana nechimiro chavo uye nerudzi rwemapundu anawo.
Muchikamu chino tichakuudza kuti ndeapi marudzi akasiyana emakomo anoputika aripo uye ndeapi kuputika kwawo.
1 Mhando dzemakomo anoputika zvichienderana nebasa rawo
2 Mhando dzemakomo anoputika maererano nekuputika kwawo
3 Mhando dzekuputika
Mhando dzemakomo anoputika zvichienderana nebasa rawo
Aya ndiwo marudzi makuru emakomo anoputika zvichienderana nerudzi rwekuita kwavo:
Active volcano. Ndiwo makomo aya asingashande uye anogona kuputika chero nguva. Izvi zvinoitika mumakomo akawanda anoputika, asi semuenzaniso, tinogona kutaura nezvegomo rinoputika reCumbre Vieja muLa Palma, Spain (ikozvino kuputika), gomo rinoputika reEtna riri muSicily, Italy (iri kuputika zvino) uye Fuego volcano muGuatemala (iri kuputika parizvino) uye Irazu volcano muCosta Rica.
Kuputika kwegomo kusingashande. Anonziwo vanhu vanorara, uye makomo anoputika anoramba achiita zvinhu zvishoma. Pasinei nebasa rayo rakaderera, rinomboputika. Kana pasina kuputika kwemakomo kwemazana emakore, gomo racho rinonzi harina kuputika. Gomo rinoputika reTeide muCanary Islands kuSpain neYellowstone super volcano muUnited States mienzaniso yemakomo akareba. Zvisinei, mienzaniso miviri yakaratidza kufamba mumakore achangopfuura, kwave nekudengenyeka kwenyika kwakanyoro munharaunda yavo, zvichiratidza kuti vachiri "vapenyu" uye vanogona kuva vanoshingaira pane imwe nguva, havasi kutsakatika kana kutamiswa.
Extinct volcano. Ndiro gomo rekupedzisira kuputika, rinotangira makore anopfuura 25.000 XNUMX apfuura. Chero zvazvingava, vatsvakurudzi havaregi kuti vanogona kuonekazve pane imwe nguva. Iyi nzira inodaidzwa zvakare kuti gomo rinoputika iro tectonic kufamba kwayo kunobviswa kubva kune magma kwaro. The Diamond Head volcano muHawaii muenzaniso wekuparara kwegomo.
Mhando dzemakomo anoputika maererano nekuputika kwawo
Aya ndiwo marudzi akasiyana emakomo anoputika aripo maererano nekuputika kwawo:
Hawaiian makomo anoputika. Mabota anobva mumakomo aya ane mvura uye haabudisi gasi kana kukonzera kuputika panguva yekuputika. Nokudaro, kuputika kwegomo kunonyarara. Mazhinji emakomo eHawaii ane marudzi aya ekuputika, saka zita racho. Kunyanya, tinogona kutaura nezvegomo reHawaiian rinonzi Mauna Loa.
Strombolian volcano. Kusiyana negomo rinoputika richangobva kutsanangurwa, gomo reStrombolian rinoratidza zvishoma zvekuyerera madhamu anopenya, ane kuputika kunosanganisira kuputika kunoramba kuchiitika. Muchokwadi, bota rinopenya sezvarinosimudza pombi, uye ipapo basa rekuputika kwemakomo rinodzikira kuburitsa mabhora akasanganiswa akasanganiswa anonzi volcanic projectiles. Zita regomo iri rinoreva gomo rinoputika reStrombolian muItaly, iro rinoputika zvine mutinhimira pamaminetsi gumi ega ega.
Vulcan makomo anoputika. Muchiitiko ichi, kuputika kwechisimba kwakanyanya kunogona kuparadza gomo ravanenge vari. Lava inoratidzwa nekuve yakanyanyisa uye ine gasi rakawanda. Semuenzaniso, tinogona kutaura nezvegomo rinoputika reVulcan muItaly, iro rakakonzerwa nekuputika kwegomo iri.
Plilian volcano. Makomo anoputika aya ane mabota anooneka zvikuru, ayo anokurumidza kuomesa nekuita puragi mugomba. Kudzvinyirirwa kwakakura kunoitwa negasi remukati kunoita kuti matsemu emukati avhure, dzimwe nguva achidzinga plug nechisimba. Somuenzaniso, tinogona kutaura nezvegomo rinoputika reBailey muMartinique, panobva zita regomo iri.
Hydromagmatic volcano. Kuputika kwevolcanic kunokonzerwa nekusangana kwemagma nemvura yepasi kana pamusoro pemvura. Zvichienderana nehuwandu hwemagma / mvura, hutsi hwakawanda hunogona kuburitswa. Rudzi urwu rwechiitiko chekuputika kwemakomo chinowanikwa mumakomo anoputika munzvimbo yeCampo de Calatrava kuSpain.
Icelandic volcano. Murudzi urwu rwegomo rinoputika, gomo rinoyerera uye kuputika kwacho kunobudiswa nekutsemuka kwevhu, kwete negomba. Saka pakaberekwa nzvimbo yakakura yemabota. Mazhinji eaya makomo anoputika ari muIceland, ndokusaka akawana zita rawo. Muenzaniso chaiwo ndeye Krafla volcano muIceland.
Volcano submarine. Kunyange zvazvo zvichishamisa, kunewo makomo anoputika ari pasi pegungwa. Zvechokwadi, kuputika kwegungwa kunowanzogara kwenguva pfupi. Mune zvimwe zviitiko, mabota akaraswa anogona kusvika pamusoro uye kuumba zvitsuwa zvinoputika sezvaanotonhora.
Ngatitarisei zvishoma nezvemhando yekuputika kune gomo rega rega. Izvo zvinoenderana nekudzidziswa uye kusimudzira mamiriro. Ngationei kuti ndeapi marudzi ekuputika aripo:
Chihawayi: Gomo rinoputika rinobudisa mabota anopenya zvishoma, ari mvura yakawanda nokuti harina zvinhu zvakawanda zvepyroclastic (musanganiswa unopisa wegasi, madota, uye zvidimbu zvematombo. Gasi rinobudiswa zvishoma nezvishoma, saka kuputika kuduku.
Strombolian: makomo anobudisa pyroclastic zvinhu. Kuputika kwacho kunoitika pano neapo uye gomo rinoputika harirambe richibudisa bota.
Vulcanian: Gomo rinoputika rinobudisa madhaka matsvuku ane mvura shoma uye rinoomesa nekukurumidza. Gore guru remhando yepyroclastic zvinhu uye yakawanda yemadota inobudiswa. Izvo zvinoratidzwa nekuputika mumhando yemakore akafanana nehowa kana fungi. Mabasa anowanzotanga nekuputika kwemvura kunobudisa tsvina. Chiitiko chikuru chinowanzo sanganisira kuputika kwe viscous magma, iyo yakazara mumhepo inoputika uye inoumba makore akasviba.
Pliniana kana Vesuviana: The volcano inoputika lava zvakanyanya viscous uye nechisimba. Iyo inoratidzirwa nekusimba kwayo kusingawanzoitiki, kuenderera kwegasi kuputika uye kubuda kukuru kwedota. Dzimwe nguva kuputika kwe magma kunoita kuti pamusoro pegomo padonhe uye kugadzira gomba. Panguva yekuputika kwegomo rePrinia, dota rakanaka rinogona kupararira munzvimbo huru. Kuputika kwegomo rePliny rakatumidzwa zita remuRoma ane mukurumbira Pliny Mukuru, akafa mukuputika kweVesuvius muna 79 AD.
Brawler: Gomo iri rakatumidzwa zita rekuputika kwegomo rePelee muMartinique muna 1902, iro rakauraya zviuru zvevanhu. Mabota akakurumidza kubatanidzwa ndokugadzira plug mugomba. Sezvo pasina pekubudisira gasi, kudzvanyirira kwakawanda kunogadzirwa mukati megomo rinoputika, saka madziro egomo rinobva atanga kukanganisa uye gomba rinoburitswa kubva kumativi ese emadziro.
Hydro-volcanic: Izvo zvinoputika zvinogadzirwa nekubatana kwemagma nemvura yepasi kana pamusoro pemvura. Iwo 'mvura: yakaenzana nekuputika kwestrombolian, kunyange zvazvo ichinyanya kuputika.
Ndinovimba kuti neruzivo urwu unogona kudzidza zvakawanda nezvemhando dzakasiyana dzemakomo anoputika uye kuputika kwawo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Network Meteorology » Geology » Mhando dzemakomo anoputika